Sampatti News च्याङ्ग्रा महँगियो त के भो ? लोकल कुखुरा छन् ! - Sampatti News
बागलुङ-हो, दसैँमा च्याङ्ग्राको मासु खान सबैको गच्छेले भ्याउँदैन । यसपालि त झन् च्याङ्ग्रा धेरैका लागि रहरमा मात्र सीमित हुनेवाला छ ।
बजारमा रोज्जा च्याङ्ग्रालाई रु ४० हजार पर्छ । पसलबाट मासु किनेर खाँदा प्रतिकिलो रु दुई हजार ।
अब आफैँ भन्नुस्, आम मान्छेले कसरी खान सक्छन्, च्याङ्ग्राको मासु । यो त केबल हुनेखानेको भान्सामा मात्र पो पाक्ने भयो । के गरिब र श्रमजीवीले दसैँमा मिठोमसिनो खान नपाउनु ? यो प्रश्नले हर कोहीलाई बिझाएको हुनुपर्छ ।
हिमालपारिबाट भित्रने च्याङ्ग्राको भाउ बर्सेनि बढेकै हुन्छ । पछिल्ला चार वर्षमा च्याङ्ग्राको मूल्य दोब्बरले महँगिएको व्यापारी बताउँछन् ।
कोभिड–१९ का कारण तिब्बतबाट च्याङ्ग्रा कम आउनु, बढ्दो करजस्ता कारणले मूल्य आकासिँदै गएको हो ।
व्यापारी महेन्द्र केसीले मुस्ताङको जोमसोम पुगेर दसैँलाई च्याङ्ग्रा ल्याएको बताउनुभयो । भाउ महँगिएका कारण पहिले झैँ धेरै च्याङ्ग्रा नल्याएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
सदरमुकाममा मासु पसलसमेत चलाउँदै आउनुभएका केसीले एककिलो च्याङ्ग्रोको मासुलाई रु एक हजार ८०० मा बेच्दै आउनुभएको छ ।
“दसैँमा च्याङ्ग्राको मासु महँगो भएर के भो र रु लोकल कुखुरा, खसीबोका छँदै छन् नी १”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्राहकलाई चाहिने जति कुखुरा दिन व्यवसायी तयार छन् ।” स्थानीय उत्पादनको प्रयोगले किसानलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै आन्तरिक बजार चलायमान हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले सञ्चालन गरेको सापकोटा कृषि फार्ममा अहिले ५०० लोकल कुखुरा छन् । फार्ममा साकिनी, गुजुमुजे, उल्टे र घाँटीखुइले जातका कुखुराको व्यावसायिकपालन हुँदै आएको छ ।
कडकनाथ, बेन्टम, सिल्की र पोलिस जातको आयातित कुखुरा पनि पालिएको छ । यस्तै चरा प्रजातिका बट्टाइ र टर्की छन् । उपभोक्ताले इछ्याएको कुखुरा फार्मबाट किनेर लैजान सक्छन् ।
लोकल साकिने जातको भाले प्रतिकिलो रु ८०० मा बिक्री भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । आयातित कुखुराको भाउ भने चर्को छ ।
लोकल जातको कुखुरा हुर्कन समय लाग्ने हुँदा पाँच-छ महिनापछि मात्र बेच्न योग्य हुन्छ । खुला ठाउँमा चर्ने र गाउँकै दानापानी खाने भएकाले लोकल कुखुरा पौष्टिक र स्वादिष्ट हुन्छन् ।
“ब्रोइलर कुखुरालाई जस्तो नियमित भ्याक्सिन, औषधि दिनु पर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बारी र पाखामा छोडेर हुर्काउने गरिन्छ ।”
रातमाटामा सापकोटासँगै भविन्द्र विक, विजय शर्मालगायत लोकल जातका कुखुरापालनमा लागेका छन् ।
चौध वर्षसम्म मलेसियामा श्रम–पसिना बगाएर फर्कनुभएका विक र विदेश जाने चक्करमा पटकपटक हण्डर खानुभएका उहाँले लोकल कुखुरामा आफ्नो भविष्य देख्नुभएको छ ।